Agba Pomeranian: Ndepụta nke Agba Niile 13 Amata Uwe Akara - Apụta
Ndị Pomeran bụ anụ ụlọ zuru oke maka ndị bi n'obodo ahụ na obere ogo ha na omume ha na-atọ ụtọ.
A maara ha nke ọma maka ọdịdị dị ndụ na uwe mkpuchi mara mma.
Agbanyeghị, ị maara na uwe okpukpu abụọ nke Pomeranian nwere ike ịbịa na 10 + agba dị iche iche?
Enwere n'ezie 13 dị iche iche Pomeranian agba nke ahụ sitere na ude mmirimmiri ma jikọta.
Ikekwe ị ga-enwe ịhụnanya na uwe elu mmanụ ha a ma ama ma ọ bụ ma eleghị anya, ị ga-enwe mmasị na ya ụkpụrụ obere brindle?
Chart Agba Pomeranian
1. Oroma Pomeranian
4. Nwa Pomeranian
9. Ude Pomeranian
11. Nwa Black & Tan Pomeranian
13. Tri-acha Pomeranian
Họrọ Agba: Ihe Know Ga-ama
Enwere 13 dị iche iche uwe uwe Pomeranian a na-amata ihe niile klọb ndị America .
Colorsfọdụ agba dị ka beaver na brindle dị obere karịa na-acha uhie uhie, oroma, ọcha na oji. Nwere ike ịhụ ndepụta zuru oke nke agba agba niile na tebụl dị n'okpuru:
oroma Bright oroma na-enweghị akara ojii. Grajentị nke ìhè na agba ọchịchịrị oroma. 1
Net Nnukwu uhie na-acha uhie uhie na ajị anụ na-acha ọkụ n'obi ha. 2
Na-acha ọcha Ezigbo ọcha na-enweghị ude ma ọ bụ akara agba agba. 3
Nwa Agba ojii siri ike. 4
Merle Latgbasa uhie na isi tan na patches ọcha. 5
Wolf Sable Isi awọ nwere imi ojii, anya ya, egbugbere ọnụ ya na paụnd ya. 6
Chocolate Ogologo agba site na mmiri ara ehi na chocolate gbara ọchịchịrị. 7
Bulu Isi awọ na-acha ọla edo na ọchịchịrị isi awọ. 8
Ude Acha ntutu dị ka mmanụ abụ. 9
Bido Streaked na agba nke-acha ọbara ọbara, gold, oroma na nwa. 10
Nwa & Tan Fluffy na nwa aji na ihu ha na azụ na nwere tan na obi, na ụkwụ. iri na otu
Bọba Acha aja aja na-acha odo odo nke na-echetara kuki icha mmirimmiri. 12
Agba agba atọ Nwa, tan na-acha ọcha patterning. 13
Orange bụ ihe kasị omenala Pomeranian agba.
Mgbe ndị hụrụ nkịta na-eche ụdị ìgwè a, ha na-eche oroma.
Ndị na-azụ anụ na-akpọ oroma Pomeranian oroma ka ọdịiche dị n’etiti agba a na oroma sable.
A na-agba agba a site na mating an oroma Pomeranian ya na efere nke na-ebu mkpụrụ ndụ ihe nkedo doro anya.
Ndị Pomeran a na-achakarị nkịta. Ọ bụ ihe ọ toụ ikiri ka ha tozuru oke ma hụ ka agba ha gbanwere site na ọcha chacha achacha na-acha oroma. Mgbe ụfọdụ ụmụ nkịta a nwere uwe mkpuchi nwere ike ịdị na-ete mmanụ oroma.
Ha na-enweghi aji ojii ma nwee agba ude na-acha oku nke nwere gradient nke ìhè na agba ocha gbara ọchịchịrị.
Orange Pomeranians dị mfe ịchọta ma bụrụ ndị a nabatara dị ka agba dị mma na ụdị ọkọlọtọ ha.
Red bụ otu n'ime ewu ewu Pomeranian agba - nke abụọ na mmanụ oroma.
Uwe Pomeranian na-acha uhie uhie bụ a miri emi-acha ọbara ọbara nke imeobodo ndo na Mkpa ọkụ ude aji na obi ha. Ọ na-abụkarị mgbagwoju anya na mmanụ oroma na-acha odo odo.
Red bụ otu n'ime ọtụtụ agba nwere ike igosi na mgbanaka. Ha yiri nke mkpụrụ ndụ ihe nketa na ndị Pomeranians ojii n'ihi na e kwuru na uwe mkpuchi abụọ ahụ sitere na mkpụrụ ndụ E Locus.
Uhie na oroma so n’ime agba abụọ kacha ewu ewu.
Onye na-acha ọcha Pomeranian bụ ọcha dị ọcha na-enweghị ude ma ọ bụ akara gbara ọchịchịrị .
Ọ bụrụ na ị hụrụ ọdịdị nke nkịta Samoyed mana ịchọrọ obere ìgwè mgbe ahụ pooch ọcha a zuru oke!
A mụrụ ha na-acha ọcha dị ka ụmụ nkịta ma nọgide na-acha agba a n'oge ndụ ha niile.
White Pomeranians na-acha ọcha n'ihi enweghị ụcha. Ha enweghị ọchịchịrị melanin ink ( ya bụ nwa eumelanin ) na nkịta a nwere. Enweghị ụcha bụ ihe na-enye ụmụ anụmanụ albino anya uhie ma ọ bụ imi pink. Agbanyeghị ọcha Pomeranian abụghị albino n'ihi na anya ya na imi ya dị oji.
Nkịta a na-enye obi ụtọ dị ka ígwé ojii zuru oke maka onye ọ bụla nke na-arọ nrọ inwe anụ ụlọ na-acha ọcha ma chọọ otu nlekọta, mmega ahụ, na nri na-edozi ahụ dị ka agba ọ bụla ọzọ nke Pomeranian.
Pomeranian a bu ezigbo mma agba ojii .
Mara site Fans dị ka ihe e kere eke nke ọchịchịrị, ha ka nwere mbinye aka mmụọ nke mmụọ anyị hụrụ n'anya banyere ụdị a.
Agba ojii bụ nke E Locus allele gene na-eme ka mmepụta nke ihe ndị na-acha oji na-eweta oji pụta siri ike nwa Pomeranian.
Kpachara anya mgbe ị na-ewe Pomeranian ojii n'èzí ka anwụ na-acha nwayọọ nwayọọ na-achapụ ajị anụ ha ma na-ebute uwe na-acha ọbara ọbara.
Agba a zuru oke maka onye na-achọ iyi akwa ojii dịka ịwụfu ajị anụ ga-adịgide!
Merle bụ ụdị agba mara mma n’ihi na ọfụma nke uwe Pomeranian gosipụtara ịchapu uhie megide isi tan na patches ọcha . Colorcha a yikwara yiri Nkịta Cattle Australia.
A na-ahụkarị ha na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha ọbara ọbara merle ụkpụrụ.
Imi na aka ha na-abụkarị ndo na-acha pinki pinki na oji ma n'anya ha nwere ike ịdị n'ebe ọ bụla na agba site na ọchịchịrị aja aja na-acha anụnụ anụnụ.
A na-eri ụkpụrụ a site na ịlụ nne na nna nwere nwa ma ọ bụ chocolate Pomeranian.
Jide n'aka na onye na-azụ gị ghọtara ihe egwu dị na nkịta njikọta azụ. Ngwakọta abuo nwere ike buru oke ọ bụ onye ntị chiri ma ọ bụ ikpu ìsì. Nke a bụ n'ihi na mkpụrụ ndụ nnabata abụọ na-egbochi ụfọdụ mkpụrụ ndụ ihe na-acha uhie uhie dị na iris na cochlea.
Nke a na agba ga-asị ha niile na nkịta ogige na zuru okè n'ihi na onye ọ bụla na-achọ ikwommiri nke agba na ha Pita.
A na-akpọ Pomeranian anụ ọhịa wolf mgbe ụfọdụ dị ka isi awọ n'ihi na ọ na-adị ka isi awọ mana o nwere ntutu na-eche nche ojii.
Varidị agba agba ntụ a nwere agba nwere sable nke na-enye ha imi ojii, anya anya, egbugbere ọnụ, na paads pad.
Akụkụ ndị gbara ọchịchịrị na-abụkarị ihu, azụ na obi.
Wolf Sable bụ otu n'ime ụcha Pomeranian dị ụkọ na ọtụtụ ndị na-misidentified dị ka oroma sable. O siri ike ịchọta anụ ọhịa wolf sable sable pomeranian n'agbanyeghị nke izizi egosiri na 1901.
Nanị ụzọ ị ga-esi jide n'aka na nwa nkịta gị bụ Wolf Sable gafere nyocha ule mkpụrụ ndụ .
Ha enweghị ihe gbasara ahụike mara maka agba ya, agbanyeghị n'ihi ụkọ ha dị oke ọnụ ma nwee ọnụ ahịa $ 2,000.
Pomeranian nke chocolate dị ka ihe egwuregwu dị ndụ!
Chocolate Pomeranian nkịta nwere ike dịgasị na agba site na mmiri ara ehi na chocolate gbara ọchịchịrị na imi na paị na-abụkarị otu ụdị aja aja na-acha nchara nchara.
Chocolate ma ọ bụ imeju imeju na-akpata site na B Locus gene na-eke pigmenti ojii nke na-agba ọchịchịrị uwe nkịta. Mgbanwe na-agbanwe agba a ma rụpụta uwe mkpuchi agba chocolate.
Dị ka ọtụtụ nkịta ndị na-acha oji na-acha odo odo, ha na-eme nke ọma ma ọ bụrụ na ewepụghị ha n'anyanwụ ogologo oge. Ìhè anyanwụ ga-acha ọbara ọbara na aji ma mee ka o sie ike ịhụ agba chocolate.
Nkịta a na-eme oke nhọrọ maka onye ọ bụla nwe ya chọrọ onye na-eje ije ihe egwuregwu .
Ọ bụrụ na onye ọcha Pomeranian bụ igwe ojii na-eje ije mgbe ahụ acha anụnụ anụnụ bụ igwe ojii mmiri ozuzo.
Nke a Pomeranian mụrụ ọlaọcha isi awọ nwere a ntutu isi awọ na-acha oji na-acha anụnụ anụnụ .
A na-amata odo odo na-acha anụnụ anụnụ site na American kennel Club ma dị mfe ịmasị.
A na-azụ ndị Bad site na nne na nna nwere agba abụọ siri ike nke na-ebu mkpụrụ ndụ.
Enwere nsogbu ahụike metụtara nkịta ọ bụla na-acha anụnụ anụnụ n'ihi na ha nwere ohere nke dilution alopecia agba nke na-akpata ntutu isi na akpụkpọ anụ.
Ọ bụrụ na a zụrụ n'aka onye na-azụ azụ ndị na-acha anụnụ anụnụ ndị na-acha anụnụ anụnụ nwere ezigbo enyi.
Ude Pomeranian bụ nkịta mara mma Ajị anụ ahụ́ dị ọcha ka ọ dị n'ụgbụgbọ mmanụ a .ụ .
A na-amụ nkịta a na-acha ude a na-acha ọcha ma uwe ya na-agba ọchịchịrị na agba mgbe ọnwa ole na ole gachara.
Otu n'ime mkpụrụ ndụ ihe nketa gụnyere imepụta ude agba bụ mkpụrụ ndụ E Locus nke na-enye uhie Pomeranian agba ya.
Colordị agba a chọrọ ọtụtụ edozi n'ihi na ajị anụ ha nwere ike igosipụta ngwa ngwa na uwe.
Nkịta nkedo nkedo streaked na agba nke-acha ọbara ọbara, gold, oroma na nwa.
Ogologo uwe Pomeranian na-arụ ọrụ dị ka kwaaji maka akwa nke ụda ụwa.
Brindle bụ ụkpụrụ karịa agba nke na-ebute ọnya gbara ọchịchịrị. Isi ihe kachasị dịkarịsịrị njọ bụ mgbe ụkwụ, ntị, uko na azụ.
Havefọdụ nwere ihe na-acha awọ na ụfọdụ agba aja aja.
Brkpụrụ na-akpata brindling site na a recessive “ee” E Locus genotype .
Ngwurugwu ọ bụla dị iche na nke ọzọ, yabụ ị ga-ejide n'aka na ị na-enweta nkịta na-achọ ihe pụrụ iche.
Nwa na tan Pomeranian bụ agba dị iche iche na-eme egwuregwu ojii na nke nchara. Ha bụ N'ụbọchị nke abụọ, nwa ojii na ihu na azụ ha ma tinye akpu na obi-ha na ukwu-ha.
Tan pụta ìhè mesiri ụdị ụdị akara a aka nke nku anya ma nye ha ọmarịcha mma. Ọtụtụ ndị nwere ọmarịcha akara ntụpọ dị n'elu anya ha na-echetara nku anya.
Ọmarịcha mma na feisty bụ ụzọ kachasị mma isi kọwaa agba a.
Ha yiri nnọọ mkpụrụ ndụ ihe nketa na mkpụrụ osisi Pomeranians na-acha uhie uhie ka ha na-ekerịta otu ihe ahụ.
Nwa na tan Pomeranian dị iche iche ma dị mma dị ka obere Rottweiler ma ọ bụ Doberman Pinscher.
Onye ọ bụla hụrụ ọdịdị nke ụdị anụ ọhịa ndị a anya kama ọ ga-enwe nkịta nwere ụdị ụlọ ga-ahụ nkịta a n'anya.
Beaver Pomeranian bụ agba aja aja na-acha aja aja nke yiri ka kuki icha mmirimmiri. A na-akpọbu ha bisiki.
Nkịta a nwere anya hazel na uwe elu aja aja kpamkpam na-acha ọkụ ude na-acha odo odo na obi ha na olu. Ha na-abia na nkpuchi di iche iche site na aja aja na agba aja aja.
Beaver's dilute chocolate coat bụ ekele ka itughari site na nmuta ihe .
Dị ka acha anụnụ anụnụ Pomeranian agba agba a nwere ike ime ka agba dilution alopecia. Nke a bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-eme ka ntutu na ntutu na-acha akpụkpọ anụ.
Dị njikere ịjụ onye na-azụ gị ma ọ bụrụ na ha kpuchie ngwaahịa ha na-azụ maka agba dilution alopecia.
Tridị Pomeranian ahụ nwere agba atọ yiri nke ojii na tan wezuga na nkịta a nwere mgbakwunye ọcha.
A maara ha nke ọma maka ha nwa, acha ọcha, na ọcha na-akpụ.
Agba a nwere ike igosipụta n'ụzọ dị iche iche:
Fọdụ na-achakarị ọcha.
Arefọdụ gbara ọchịchịrị.
Arefọdụ bụ ngwakọta nke ihe atọ ahụ.
Ihe dị ka ọ dị mgbe ọ bụla na-apụta na agba a bụ akara ntancha abụọ na-enye ha okwu ngosi.
Dika uwe ndi nwere agba ato n’egbo di iche iche nke oji, acha ocha na nke ocha, onye obula nke n’acho udiri a gha enwe nkita puru iche. Ha zuru oke maka onye ọ bụla na-achọghị ịkwado na otu agba!
Abịa n’ihe gbasara pomeranian agba enwere ndo dị iche maka ụdị mmadụ ọ bụla.
Ọtụtụ agba dị na ndepụta a (dịka uhie, oroma, chocolate) dị ezigbo mma. Agbanyeghị, ị kwesịrị ịma maka nke a nchegbu ahụike na agba agba (dịka acha anụnụ anụnụ na beaver). A na-ejikọta agba ndị ajụrụ agba na alopecia, ntutu na akpụkpọ anụ.
Ọtụtụ nyocha ọ bụla breed nke merle Pomeranians.
Ọ bụrụ na onye na-azụ ihe na-ere ụmụ nkịta mpịakọta abụọ ( ya bụ na nne na nna jikọtara ọnụ ) zere ha. Ndị a puppy nwere ike nwere auditory na visual mbipụta.
Ikwesiri ịtụ anya ịchọta obere ọnụahịa ọnụahịa maka agba ọ bụla. Ejiri omenala Pomeranian dị ọnụ ahịa dị n'etiti $ 1,000 na $ 1,500. Obere agba dị ka oji, brindle, ọcha na acha anụnụ anụnụ na-adịkarị ọnụ na $ 1,500 na $ 2,000.
Nwekwara ike-amasị: Micro Pomeranian Guide: 5 Ga-agụ Eziokwu
Ndị Pomerania bụ obere nkịta ndị na-ahụ n'anya, mara mma ma mee nhọrọ dị ukwuu maka ndị nwe oge mbụ.
N'ime ndepụta a anyị kesara gị niile 13 mara agba na uwe ejiji - mana nke a bụ naanị ọnụ nke iceberg.
Ọ bụrụ n ’ị chere na nke a bụ nri zụrụ gị, gbalịa chọta ndị na-eme ụdị ihe dị n’obodo na-azụ agba dị iche iche. Largedị nnukwu agba ha dị iche iche na-eme ka ịchọta nwa nkita ọbụna ka mma.
Kedu agba nke kachasị amasị gị? Ka anyị mara na ihe ndị dị n'okpuru.
Nkịta Beaglier - obe kacha mma Beagle na mbara ala?
kedu nkịta havapoo
kedu obere onye ọzụzụ atụrụ Australia
German onye ọzụzụ atụrụ lab pitbull mix
otu esi azụ nwa nkịta boxador
ihe nkịta na -azụ nwere uwe mkpuchi